THBP: ပဒဂါသီး သုပ်စားကတ်ပါမေ
ပဒဂါသီးသုပ် စားဖို. ပါးစပ် တပြင်ပြင်နဲ. ဖြစ်နီစော် တစ်နှစ်လောက် ရှိဗျယ်။ လူမစုမိစော်နဲ. စင်္ကာပူမှာ ပဒဂါသီး အစိမ်းရှားစော်နဲ. တခါလေ့ မလုပ်စားဖြစ်။ ညမချေ ခင်ဥမ္မာထွန်း နဲ. Facebook မှာ တွိတုန်း ပြောလိုက်တေ။ ပဒဂါသီး သုပ်စားကတ်မေလို.။ ရပါရေ မမ လူစုလိုက်ပါမေ။ စနီနိရာ ၃နာရီလောက်အိမ်ကို ပါလတ်ပါလတ်။ ယဂေ သဂါတွင်းကျစော်ဗျယ် မဟုတ်ပါလားယေ။
စနီနိခါ သုံးနာရီတောင်မထိုးသိ စားပါလခရေ။ ယပြီးဂေ အောက်ထပ်က ဆိုင် က ချယ်ရီသီးချေ ကြက်မောက်သီးချေ အစပ်ပြေစားရအောင်လို. ဝယ်ခရေ။ ခင်ဥမ္မာထွန်း ပဒဂါသီး နှစ်လုံးနဲ. ကျင်ကွင်းလို.ရာတွိပါရေ။ တယောက်လေ့မရောက်သိ။ ပုဇွန်ခြောက်ရီစိမ်၊ ငပိ အားရပါးရ တစ်တုံးနဲ. ငရုတ်သီးမီးဖုတ် တစ်ပုံအနားမှာတွိရေ။ လာ ယဂေ အခွံသင်ကတ်မေ ဆိုပြီးက ပဒဂါသီးတစ်လုံး အယင်ကိုင်ရေ။ ဓါးက တုံးရေ ဆိုစော်မှာ သူပါကိုယ်ပါ ချွေးပပြိုက်ပြိုက်ကျပါရေ အခွံသင်စော်။ ပေါက်ဖို.လားဆိုမှာ မပေါက်မမတဲ့။ အတုံးချေ အတုံးချေ လှီးဖို.တဲ့။ ကိုယ်ကပဒဂါသီးဆိုကေ ပေါက်မှ စားကောင်းပိုင်တွိရေ။ ယဂေ ကိုယ်က ပေါက် သူက အတုံးချေ လှီးနဲ.ပင် နှစ်ယောက် ချင်ဆီပျင်ကတ်ပျယ်မနားယေ။ စကားလေ့ တပြောပြောနဲ. ၄နာရီထိုးဗျယ် တယောက်လေ့ မရောက်။ ရခိုင်သားနာရီ။း)
တနားနီမှာ ကံဆိုးသူမောင်ရှင် ခင်မောင်ဦး ရောက်ပါလတ်ပါရေ။ လုပ်နီစော် တစ်နာရီရာ ရှိရေ လက်ကားရား ခြီကားရားနဲ. လုပ်နီကတ်စော် ပဒဂါသီး ပေါက်စော် အလုပ်မပြီးသိ။ ထိုကလေချေလာစော်နဲ. ကယ်တင်ရှင်လာပိုင် ကောင်းဝမ်းသာလားစော်ပါရာမနား။ ယဂေ ၃ ယောက်ဝိုင်းလို. လုပ်ပစ်ကေ စကေယင်လားပါရေ။ ပဒဂါသီး နှစ်လုံးကို လောက်ဖို.လားမလောက်လား စိုင်းစားနီစော် ဒုံပြတ်ရရေ။ ယပြီးကေ ငရုတ်သီး တစ်ဒုံ ထောင်းရေ။ ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းပြီးကေ ငရုတ်သီး ငပိနဲ. အရာရောလို.ထောင်းရေ။ ကြက်သွန်ဖြူ အကြီးမသန် တစ်ဥ နဲ. ငရုတ်ကောင်းက တစ်ပုံထောင်းရေ။ ယင်းခါကပင် အနံ.က မွှီးနီပါဗျယ်။ အားလုံးထောင်းပြီးစော်နဲ. မင်းဂျိုးသီး အပိ ကို ရီနဲ. ပပျစ်ချေ ဖျော်ပလိုက်တေ။ ယပြီးကေ နယ်ဖို. အဆင်သင့်ဖြစ်ပါဗျယ်။ ၅နာရီထိုးပါဗျယ် တစ်ယောက်လေ့ မရောက်သိ။
ရခိုင်မုန်.တီ ဟင်းရည်ထုပ် (အသင့်စား) တစ်ထုပ်ကို ခင်ဥမ္မာထွန်း အိမ်က အမ တစ်ယောက်ကလာပီးရေ။ ယင်းချင့်ကို ရီထည့်ပြီးကေ ဟင်းရည်ဆောက်။ ယပြီးကေ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းဗျယ်ထည့်ပလိုက်မှာ ကောင်းစားကောင်းထမန်းဟင်းရည် ဖြစ်လခရေ။ ပဒဂါသီးကတော့ သုပ်ဖို.အဆင်သင့်ဖြစ်နီဗျယ်။ များလို. နှစ်ဒုံခွဲလို.သုပ်ရရေ။ ရောလို.သုပ်ဖို. မုန်.တီဖတ်လေ့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပျယ်။ ပဒဂါသီးထည့်။ ငရုတ်သီး ငပိ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်း ရောလို.ထောင်းထားစော် တစ်ဝက် ကိုထည့်၊ မင်းဂျိုးသီးအရည် တစ်ဝက်ထည့်ပြီးကေ ရောလို.မွှေ ပလိုက်တေ။ အနံ.က ဆောင့်လို.တက်ပါရေ။ အနှစ်နှစ် ကာလ က စားချင်နီသော် ရခိုင်ပဒဂါသီးသုပ်အနံ.။ မွှီးလို. ကြိုင်လို.။ ဆားမြည်းချင်လို. မရှိဗျယ်။ ဆားမြည်းပြီးစော်နဲ. ထုံးစံအတိုင်း အချဉ်လိုနီပိုင် အစပ်လိုနီပိုင် တွိရည်။ အရာ တကျော့ ငရုတ်သီးနဲ. အချဉ် ထပ်လို.ထည့်ရေ။ ယပြီးကေ မုန်.တီဖတ်ထည့်လို. သုပ်ပလိုက်တေ။ နည်းစော် မဟုတ်တစ်ဒုံ။ သုပ်လို.ပြီးစော် နဲ. လူတိလေ့ ရောက်ကတ်ပါဗျယ်။ နောက် မုန်.ဖတ်မပါပဲနဲ. ပဒဂါသီးသတ်သတ် အားရပါးရ တစ်ဒုံသုပ်ပါသိရေ။ ယပြီးခါမှ ဟင်းရည်သောက်ချေနဲ. စားပလိုက်စော် ကောင်းအရသာရှိစော်ရာ မဟုတ်ပါလား။
စပ်စော်ကတော့ မပြောပါကေ့။ ငရုတ်သီးနည်းနည်းများလားရေ ထင်ရေ။း) အဝင်ပူရေပိုင် အထွက်လေ့ ပူပါရေ။ နောက်နှစ်ရက်ဆက်တိုက် အိမ်သာနားမှာ ကပ်လို.ရာနီရရေ။ ယဂေလေ့လင့် အရာတစ်ခေါက် သုပ်စားပါဖို.သိ။ တောင်းဆိုရေလူတိကလေ့ အများကြီးထော။း) ယင်းခါ စားဖို.ဖိတ်လိုက်ပါမေယေ။
ခင်ဥမ္မာထွန်း ဆိုတာ ပါးဖောင်းလေးလား အမ